Nabadgelyo GetDeb iyo PlayDeb ... ugu yaraan hadda | Laga soo bilaabo Linux
GetDeb iyo PlayDeb waxay ku koreen heer aysan macquul aheyn in la ilaaliyo, sida ay sheegtay abuureheeda Swetna Gogineni, oo ku dhawaaqday Google+ in sannadahan oo dhan ka dib, HelDeb y Playdeb lahaa joojiyay.
Swetna Gogineni waxay ku dhawaaqday in sababo is biirsaday oo u dhexeeya luminta keydka macluumaadka cilad darteed xagga adeegaha ilaa waqti la'aan, aysan u suurta geli doonin inay ku sii socoto howsha sharafta leh, caajiska iyo yar ee la aqoonsan yahay ee ilaalintooda. Keydadka
Kuwa aan aqoon iyaga, kuwani waxay ahaayeen keyd rasmi ah oo aan rasmi ahayn oo loogu talagalay Ubuntu, oo aan uga soo hadalnay fursado kale, oo ay ku jireen noocyo casriyeysan oo badan oo ah codsiyada caanka ah iyo ciyaaraha.
Wixii nostalgic ah
Nasiib wanaagse, keydadka GetDeb iyo PlayDeb ayaa wali laga heli karaa muraayaddooda waana ay sii ahaan doonaan, ugu yaraan hadda. Haddii aad xiiseyneyso inaad ogaato liiska muraayadaha waxaad isticmaali kartaa khadka ...
Tijaabinta-getdeb-intitle: "Index of"
Search Raadinta Google.
Qoraallada ay ku jiraan dhammaan macluumaadka xirmada ee Precise iyo Quantal waxaa laga heli karaa meelahooda kala geddisan ee GitHub oo leh xiriirada soo socda:
Iskuxirka shabakada ee loo isticmaalo degellada GetDeb iyo PlayDeb, oo loo yaqaan 'apt-portal', ayaa laga heli karaa iskuxiraha soo socda:
Sidoo kale, xiriiriye soo socda waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho qoraallo si otomaatig ah u socodsiiya habka dhismaha xirmada:
Bakhaarka buuxa ee xirmooyinka .deb waa la soo dejisan karaa iyadoo la adeegsanayo qoraalka soo socda. Si kastaba ha noqotee, Swetna waxay weydiisaneysaa in loo isticmaalo oo keliya haddii ay lagama maarmaan tahay in la soo dejiyo dhammaan baakadaha hal mar, maadaama kaydka oo dhan uu culeyskiisu yahay 84GB.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Nabadgelyo GetDeb iyo PlayDeb ... ugu yaraan hadda
ma dhicin, fiiri іnformatіvе.
ρο Waa maxay sababta ѕρeсiаli otherts-yada kale ee dесtor-ka aysan u fahmin tan. Waa inaad sii wadataa qoraalkaaga. Waan hubaa, inaad haysato aqristayaal aad u tiro badan oo 'alrеady base'!
Heгe waa gurigeyga: sfgate.com
Boggayga :: http://www.sfgate.com
Waa wax laga xishoodo in mashruuc leh karti wanaagsan la joojiyo, in kasta oo software-ka uusan waligiis isiinin natiijooyin wanaagsan, waligey rakibi kari maayo wax xD ah
Ma noqon karo…. Waxaan u imid Linux sababta oo ah waan ka dheregsanaa W $, laakiin waxyaalahan ayaa ah kuwa shakiga kaa gelinaya oo laga yaabo inay dhinaca kale kaa eegaan…
Beddel Wakiilka Isticmaalaha Chrome adoo adeegsanaya kordhin